- Total $435 Billion 
w:ar:الإمارات العربية المتحدة Dawlada Imaaraatka Carabta:(Carabi:دولة الإمارات العربية المتحدة‎) Waa isku tega (darsanka) 7 imaaradood, dhacdo koofur bari Jaziirad u ekeda Carabta ee koofur galbeed qaarada Aasiya kaabiga ku heyso gacanka carabta Sacuudi Carabiya iyo Cumaan. waxa ay dawlada imaaraadka carabtu ka koobantahay 7 imaaradood oo kal ah Imaaraadka Carabta: Dawlat al-'Imārāt al-'Arabīyyah al-Muttahidah), mararka qaarkood waxaa loo yaqaan 'Emirates' (Carabi: الإمارات al-'Imārāt), waa dal ku yaalla galbeedka Aasiya oo ku taal dhammaadka koonfureed ee jasiiradda Carabta oo ku yaalla Gacanka Ciraaq, oo u dhaxeeya Oman ilaa bari iyo Sacuudi Carabiya xagga koonfureed, iyo sidoo kale in la wadaago xudduudaha badda ee Qadar iyo galbeedka iyo Iiraan. Boqortooyada Sharciga ah ee madaxbannaani waa isbahaysiga todoba qandaraas oo ka kooban Abu Dhabi (oo u adeegta caasimada), Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah iyo Umm al-Quwain. Amar kasta waxaa xukumaya taliye; wadajir, waxay si wadajir ah u sameeyaan Golaha Sare ee Federaalka. Mid ka mida taliyayaashu waxay u adeegaan madaxweynaha Imaaraadka Carabta.  Sanadkii 2013, dadweynaha UAE ayaa ahaa 9.2 milyan, kuwaas oo 1.4 milyan ay yihiin muwaadiniinta Emirati iyo 7.8 milyan ayaa ah dad ajinabi ah    Shaqo-qabashada dadka ka shaqeeya Imaatinka iminka jira ayaa dib loogu soo celiyay nin dhalasho oo casri ah oo ka yimid Afrika ilaa 125,000 Bisha Kowaad iyada oo laga helayo goobta Faya-1 ee Mleiha, Sharjah. Meelaha aasaasiga ah ee la xariira da'da Neolithic iyo Da'da Bronze waxaa ka mid ah goobtii ugu caansan ee gudaha ee Jebel Buhais. Ka dib tobannaan sano colaadaha badda, xeebaha xeebta waxaa loo yaqaan 'State Trucial States' iyada oo la saxiixday Heshiiska Badbaadinta Badbaadada Badaha ee Britishka 1819 (oo la ansixiyay 1853 iyo mar kale 1892), kaas oo aasaasay Dowladaha Afduubka ah sida British Protectorate. Qorshahan ayaa ku dhamaaday xoriyad iyo aasaaskii Isbahaysiga Imaaraadka Carabta 2dii Disembar 1971, isla markiiba ka dib markii Ingiriisku ka tagay waajibaadkii heshiiskii. Lix xildhibaan ayaa ku biiray UAE 1971-kii, toddobaadkii, Ras al-Khaimah, ayaa ku biiray federaalka 10 Febraayo 1972. 
Islaamku waa diinta rasmiga ah iyo carabi waa luqadda rasmiga ah ee Imaaraadka. Kaydka saliidda ee Imaaraadka Carabta ayaa ah kan dunida ugu weyn ee dunida ugu weyn iyada oo kaydka gaaska dabiiciga ah uu yahay adduunka 17aad ee ugu ballaaran.   Sheekh Zayed, oo ah hoggaamiyaha Abu Dhabi iyo madaxweynihii koowaad ee UAE, ayaa kormeeray horumarinta Emirates, wuxuuna dakhliga saliidda ka dhigaa daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo kaabayaasha.  Dhaqaalaha Imaaraadka ayaa ah midka ugu badan ee ka mid ah Golaha Iskaashiga Khaliijka, halka magaalada ugu badan ee magaalada Dubai ay tahay magaalo muhiim ah oo caalami ah iyo duulimaad caalami ah iyo warshadaha bada ee caalamiga ah   Si kastaba ha ahaatee, waddanku aad ayuu ugu kalsoon yahay saliidda iyo gaaska marka loo eego sanadihii hore, dhaqaale ahaanna xooga saaraya dalxiiska iyo ganacsiga. Dawladda Imaaraadka Carabtu maaha canshuur dakhliga inkastoo ay jirto nidaam canshuur shirkad ah iyo canshuur dheeraad ah ayaa la dhisay sannadkii 2018 markay ahayd 5%.  Aragtida caalamiga ah ee Imaaraadka Carabtu waxay keentay in loo aqoonsado inay tahay awood gobol iyo mid dhexe.   Waa xubin ka mid ah Qaramada Midoobay, Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka, OPEC, Dhaqdhaqaaqa Aan Sharciga Ahayn
Arab League 2,400,000+
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IMF database 2022
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IMF database 2018
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Imaaraatka_Carabta&oldid=234433"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 20 Abriil 2022, marka ee eheed 05:39.